Dangerous Worldwide Spam Scam - Warning From Semalt
Vadzivisi vemazano vakaisa pfungwa dzavo kuburikidza newebhu-based networking media nechinangwa chekutora dunhu rimwe nerimwe. Izvo zvinoumba pfungwa yokuti vateereri vechirangarudzo vakasarudza kuita zvishoma. Panzvimbo pekugadzirisa nzira yekugadzirisa nekushambadzira nekugadzirisa kwepurogiramu inoenderera mberi, iyo malware ikozvino inotora hurongwa huri nyore.
Oliver King, Mutengi Wakabudirira Kwevateresi Semalt Dhijita Dhidhijita, anopa nyevero yekurwisa kwakaipisisa kubva kune vanotya pasi rose - grain systems inc jobs.
Kunyange zvazvo chikamu chikuru chedu chinowanzotarisa hoodlums sedhijitori sevadzidzisi vepenyanzvi vanoita zvigadziro zvinopisa zvichibva kumashure emumvuri we hoodie, chokwadi chechinhu chacho chikamu chikuru chiri chekunyengedza nyanzvi. Havana dambudziko nekugadzirisa nzira dzemazuva ano kuti dzipinde nenhungamiro yakaoma yekuchengetedza. Sei uchiedza kuenda kune zvose zvinokanganisa iyo iwe unogona kukanganisa mushandi pakupa data kana kubhadharana?
Vasika vemazano vanopa mazano maPccotts anodiwa kuti varwise hondo kune spam mupiro wekuchengetedza nzvimbo yakakosha kubva pakutsvaga nekuwedzera kwebhokisi yebhokisi yebhokisi inotora mazinga.
Manvelan manhandles anobvumira vatadzi vemaware kuti vaone kana vane mishonga isina tsvina uye ine mhando.Vashandi ava vanoshandiswa senzira yekucherechedza munhu asina kuchena / zombie kusarudza kana chirwere ichi chiri kurarama uye kwete pane imwe yevana vakapiwa vakomana.Vakomana vacho vanoongorora vanobva kumativi ose enyika uye pane kure-kusvika, kuratidza kuti Musiki akanga achiedza kuwana nyika yose ichipesana neyedzimwe nzvimbo.Ichireveti ichiita cheki ichi chakaiswa Sarvdap, chinopera mune imwe nguva iyo inowana mhepo yakasvibiswa pakutsvaga.
Ichazvivhara pasi kana chirongwa chekutambudza chinowanika pamichina yakasvibiswa, mumakero ekushandisa aya anogara achiratidza kuswedera kweruzivo rwemagetsi. Muchiitiko chekuti cheki idzi dzinopfuura, Sarvdap panguva iyoyo inoedza kushamwaridzana neZimbabwe yekutsvaga peji yekuongorora kuwanika uye shure kwekubatanidza kune iyo inoshevedza uye yekudzora seva.
Ndiyo nzira yekufananidza nayo kushandiswa kwezvinonzi malware test test administrations sehutachiwana Kuwedzera kusvika kune VXers vachiedza kuongorora kana maTrojans avo achazununguka pasi pekushungurudzwa kwemashure ehutachiona.
Musungo uyu unogona kupararira. Vanyori vanonyadzisira vanowana nguva dzose kubva kune vanobvumirana. Zvisikwa zvekunyanya-kutora spam-centered-botnets zvingabatsire zvakanyanya kuburikidza nekuwedzera kuongorora chekuchechera kuti kuwedzere kupera kwema spam.
Kucherechedza kuti pasinei nekuve rudzi rwekutanga rwekunyorwa kwekombiyuta, spam inoramba ichinyanyisa - kuendesa chero chimiro chekushaya malware, ransomware nemashoko ekunyengera-kune masangano ehuwandu hwega, Edmunds akatsigira kuti pane "zvinodiwa" iyo inogona kutorwa kuitira kuti inodzivisa zvachose hondo idzi.
Chimwe chezvinhu izvi ndiko kushandiswa kweDMARC Area-Based Message Validation, Kuzivisa uye Kuwirirana - uye kokorodzano yekuongorora iyo inoita kuti vatengi vaone kuti email chaiyo ndeipi uye chii chinonzi spam chakapedzwa nehuwandu hwekuwedzera kwekuchinja nekuchengeteka .